Imodeli yezikhukula kunye nekhosi yohlalutyo-kusetyenziswa i-HEC-RAS kunye neArcGIS-Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Imodeli yezikhukula kunye nekhosi yohlalutyo-kusetyenziswa i-HEC-RAS kunye neArcGIS
Fumanisa amandla e-Hec-RAS kunye ne-Hec-GeoRAS yokumisela imodeli yesiteshi kunye nohlalutyo lomjelo #hecras
Le khosi esebenzayo iqala ukusuka ekuqaleni kwaye yenzelwe inyathelo ngenyathelo, ngokwenza imisebenzi efanelekileyo, ekuvumela ukuba wazi izinto ezisisiseko kulawulo lwe-Hec-RAS.
Nge-Hec-RAS uya kuba nakho ukwenza izifundo zesikhukula kwaye uchonge iindawo ezinezikhukula, uzidibanise nokucwangciswa kwedolophu nokucwangciswa komhlaba.
Xa kuthelekiswa nezinye iikhosi ezigxila ekucaciseni ulwazi lobuchwephesha, le khosi ikwanika inkcazo ecacileyo nelula ngawo onke amanyathelo afanele ukulandela ukusuka xa sifuna ukuqalisa isifundo ngonogumbe de kube yintsingiselo yakhe yokugqibela, sisebenzisa amava esiqokelelwe emva ngaphezu kweminyaka ye-10 iqhuba izifundo ezinjalo zolawulo, ukukhuthaza babucala okanye iiprojekthi zophando.
Yenza izifundo ze-hydraulic zeendlela zendalo okanye ezenziweyo.
Vavanya iindawo zokugcwala kwemilambo kunye nemijelo.
Cwangcisa lo mmandla ngokusekwe kwimimandla yezikhukula okanye i-hydraulic domain yoluntu.
Yenza ukwenziwa kweendlela ezitshiswayo okanye izakhiwo ze-hydraulic.
Ukudibanisa ukusetyenziswa kweeNkqubo zoLwazi lweJografi (i-GIS) ukulungiselela kunye nokuphucula izifundo ze-hydraulic.
Akukho lwazi lwangaphambili lobuchwephesha okanye lwesoftware olufunekayo, nangona lunokuqhubela phambili ukukhula ngokukhawuleza kwekhosi esele isebenzisa i-ArcGIS okanye enye i-GIS.
Ngaphambi kokuqala, kufuneka ufake i-ArcGIS 10, kwaye umhlalutyi we-Spatial kunye ne-3D ukuhlaziywa kwandiswe.
Uqeqesho kwaye unomdla wokufunda.
Abafundi abaphumelele izidanga okanye abafundi abakumanqanaba ahambelana nolawulo lwommandla okanye okusingqongileyo, njengabaNjineli, iiJeographics, iiArchitologists, iiJeologists zeeSayensi zeNdalo, njl.
Abacebisi okanye iingcali ezinomdla kulawulo lwendawo, iingozi zendalo okanye ulawulo lwehydraulic.
NguMoya, nguMntu onguMntu, ngaba uyavuma ukuba uyinto entsha okanye engenanto?